समाचार - समग्र फिल्महरु को उपचार र सुधार को सुझाव को प्रभावित कारक
समग्र फिल्महरु को उपचार र सुधार को सुझाव लाई प्रभावित कारक
आदर्श उपचार प्रभाव प्राप्त गर्न को लागी, धेरै कारकहरु लाई विचार गर्न आवश्यक छ, सहित:
1. उपचार कोठा र आदर्श स्थिति को रूप: गति र तातो उपकरण र सुरंग बाट तातो हावा को मात्रा; जमीन र उपचार कोठा को दुई वा धेरै पक्षहरु पर्याप्त र एकसमान तापमान तातो हावा छ; वास्तविक र सेट तापमान, र गर्मी संरक्षण र अपशिष्ट निर्वहन को बीच सानो अंतर अनुरोध पूरा; फिल्म रोल सार्न र लिन सजिलो छ।
2. उत्पादनहरु प्राविधिक अनुरोधहरु लाई पूरा।
3. कार्य, कोरोना मूल्य, गर्मी प्रतिरोध, आदि टुक्रा टुक्रा fims को।
4. चिपकने: विलायक चिपकने वाला, विलायक रहित चिपकने वाला, एकल वा डबल घटक पानी आधार चिपकने वाला, तातो पिघ्ने चिपकने, आदि।
यो कागज मुख्य रूप लेमिनेशन फिल्महरु र चिपकने मा केन्द्रित छ।
1. टुक्रा टुक्रा फिल्महरु
पीई फिल्म को भौतिक, गर्मी प्रतिरोध र बाधा प्रदर्शन, जो व्यापक रूप मा प्रयोग गरीन्छ, अझ राम्रो हुनेछ, जब पीई को घनत्व बढ्छ। एउटै घनत्व संग पीई फिल्महरु तर फरक उत्पादन प्रक्रियाहरु फरक प्रदर्शन छ।
CPE छिटो, कम क्रिस्टलीयता, उच्च पारदर्शिता र कम turbidity संग चिसो गर्न सकिन्छ। तर आणविक व्यवस्था अनियमित छ, यो खराब बाधा प्रदर्शन, जो उच्च transmittance बनाइरहेको छ। र यो LDPE संग उस्तै छ। तसर्थ, पीई फिल्महरु को उपयोग गर्दा तापमान धेरै धेरै हुनु हुँदैन। जब पीई को गर्मी प्रतिरोध सुधार छ, उपचार तापमान उच्च हुन सक्छ।
२.१ ईथाइल आधारित चिपकने वाला
टुक्रा टुक्रा फिल्महरु र चिपकने को प्रदर्शन को अनुसार, उपचार को अवस्था विभिन्न स्तर मा विभाजित गर्न सकिन्छ:
तापमान 42-45℃, समय 48-72h
४५-५५ तापमान℃, समय 48-96h
5. विशेष, १०० भन्दा माथि तापमान℃, प्राविधिक सहयोग अनुसार समय।
सामान्य उत्पादनहरु को लागी, घनत्व, मोटाई, विरोधी ब्लक, फिल्महरु को गर्मी प्रतिरोध प्रदर्शन को रूप मा साथै झोला को आकार, उपचार तापमान धेरै उच्च हुनु हुँदैन। सामान्यतया, 42-45℃ वा तल पर्याप्त छ, समय 48-72 घण्टा।
बाहिरी टुक्रा टुक्रा फिल्महरु, जो उच्च प्रदर्शन र ठीक गर्मी प्रतिरोध को आवश्यकता उच्च तापमान को इलाज को लागी उपयुक्त छन्, जस्तै ५० भन्दा माथि℃। PE वा गर्मी सील CPP जस्तै भित्री फिल्महरु, ४२-४५ को लागी उपयुक्त छन्℃, उपचार समय लामो हुन सक्छ।
उबलने वा retort उत्पादनहरु, जो उच्च प्रदर्शन र उच्च गर्मी प्रतिरोध को आवश्यकता छ, चिपकने वाला कारखाना प्रदान गर्दछ जो उपचार को शर्तहरु संग सम्झौता गर्नुपर्छ।
उपचार समय प्रतिक्रिया पूरा दर, घर्षण गुणांक र गर्मी सील प्रदर्शन को अनुरूप हुनुपर्छ।
विशेष उत्पादनहरु उच्च उपचार तापमान को आवश्यकता हुन सक्छ।
२.२ विलायक रहित चिपकने
यदि सील प्रदर्शन प्रदर्शन को आवश्यकता पूरा गर्दछ, विलायक बिना टुक्रा टुक्रा उत्पादनहरु को, जसको भित्री फिल्महरु कम घनत्व छ, चिपकने वाला धेरै मुक्त मोनोमर छ, यो सील गर्न को लागी कठिन बनाउँछ। तसर्थ, कम तापमान उपचार 38-40 को लागी सिफारिश गरिएको छ℃.
यदि प्रतिक्रिया पूरा दर आवश्यकता पूरा, लामो समय उपचार को लागी विचार गर्नु पर्छ।
यदि गर्मी सील फिल्महरु उच्च घनत्व छ, उपचार तापमान 40-45 हुनुपर्छ℃. यदि प्रतिक्रिया पूरा दर र गर्मी सील प्रदर्शन सुधार गर्न आवश्यक छ, उपचार समय लामो हुनुपर्छ।
सख्ती परीक्षण एक सामूहिक उत्पादन अघि एक जरूरी छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न।
के अधिक छ, आर्द्रता लाई विचार गर्नु पर्छ। विशेष गरी सुक्खा जाडो मा, उचित आर्द्रता प्रतिक्रिया दर तेज गर्न सक्छ।
२.३ पानी आधारित चिपकने
जब VMCPP टुक्रा टुक्रा, टुक्रा टुक्रा मेशिन पर्याप्त सुक्खा हुनुपर्छ, वा aluminized तह oxidized गरिनेछ। उपचार को समयमा, तापमान धेरै उच्च वा धेरै कम हुनु हुँदैन। उच्च तापमान उच्च घर्षण गुणांक को लागी नेतृत्व गर्दछ।
२.४ तातो पिघल चिपकने
सामान्यतया प्राकृतिक उपचार छान्नुहोस्, तर पिघलने पछि आसंजन प्रदर्शन ध्यान दिनुपर्छ।
३. कड़ाई नियन्त्रण तापमान तापमान
अनुसन्धान को अनुसार, प्रतिक्रिया दर को पहलू मा, लगभग 30 को तहत कुनै प्रतिक्रिया छैन℃. 30 भन्दा बढी℃, हरेक १०℃ उच्च, प्रतिक्रिया दर को बारे मा4पटक सुधार। तर योको तापमान मा सुधार गर्न सही छैन अन्धो प्रतिक्रिया दर को गति, धेरै कारकहरु लाई ध्यान दिनुपर्छ：वास्तविक प्रतिक्रिया दर, घर्षण गुणांक र गर्मी सील शक्ति।
सबै भन्दा राम्रो उपचार परिणाम प्राप्त गर्न, उपचार तापमान बिभिन्न पक्षहरु मा विभाजित गरिनु पर्छ, टुक्रा टुक्रा फिल्महरु र संरचनाहरु अनुसार।
वर्तमान को लागी, सामान्य समस्याहरु निम्नानुसार छन्:
एक, उपचार तापमान धेरै कम छ, कम प्रतिक्रिया दर बनाउन, र उत्पादन तातो सील वा उबले पछि समस्या छ।
दुई, उपचार तापमान धेरै उच्च छ र तातो सील फिल्म कम घनत्व छ। उत्पादन नराम्रो तातो सील प्रदर्शन, उच्च घर्षण गुणांक र खराब विरोधी ब्लक प्रभाव छ।
सबै भन्दा राम्रो उपचार प्रभाव प्राप्त गर्न को लागी, तापमान र समय को उपचार वातावरण को तापमान र आर्द्रता, फिल्म प्रदर्शन र चिपकने वाला प्रदर्शन द्वारा निर्णय गर्नु पर्छ।